3D Acoustic Panels များ၏ Effect ကို သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းရင်းများ - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
3D Acoustic Panels များ၏ Effect ကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းရင်းများ
အကျိုးသက်ရောက်စေသော အကြောင်းရင်းများ3D အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အကန့်များ
1. အသံစုပ်ယူမှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချခြင်းအပေါ် အိမ်တွင်းအသံအရင်းအမြစ်အခြေအနေများ၏ လွှမ်းမိုးမှု။ အခန်းထဲတွင် အသံအရင်းအမြစ်များစွာ ပြန့်ကျဲနေပါက အခန်းတွင်းရှိ နေရာတိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်အသံသည် အလွန်အားကောင်းပြီး အသံစုပ်ယူမှု သက်ရောက်မှုမှာ အတော်လေး ညံ့ဖျင်းပါသည်။ လျှော့ချမှုပမာဏမှာ အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း အော်ဟစ်သံများ လျော့နည်းသွားကာ အိမ်တွင်းဝန်ထမ်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဆူညံသံများထွက်ပေါ်လာကြောင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်ခံစားချက်ကို ဖယ်ရှားပေးကာ တုံ့ပြန်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။
2. အသံစုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများ၏ ရောင်စဉ်တန်းဝိသေသများသည် ဆူညံသံအရင်းအမြစ်၏ ရောင်စဉ်တန်းဝိသေသများနှင့် သဟဇာတဖြစ်သင့်သည်။ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းအား အသံအရင်းအမြစ်၏ ရောင်စဉ်တန်းလက္ခဏာများနှင့်အညီ ရွေးချယ်သင့်ပြီး အသံစုပ်ယူသည့်ပစ္စည်း၏ ကြိမ်နှုန်းသည် ဆူညံသံအရင်းအမြစ်၏ ရောင်စဉ်တန်းလက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဆူညံသံများအတွက်၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် ဆူညံသံကို အသုံးပြုပါ။
3. အသံစုပ်ယူမှုနှင့် ဆူညံသံလျှော့ချခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အခန်း၏ပုံသဏ္ဍာန်၊ စကေးနှင့် အသံစုပ်ယူမှု တိမ်းညွှတ်မှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အခန်းအကျယ်အဝန်းသည် ကြီးမားပါက၊ လူများ၏ လှုပ်ရှားမှုဧရိယာသည် အသံအရင်းအမြစ်နှင့် နီးကပ်နေပြီး၊ တိုက်ရိုက်အသံသည် လွှမ်းမိုးနေပြီး ဤအချိန်တွင် အသံစုပ်ယူမှု သက်ရောက်မှုမှာ အားနည်းပါသည်။ အသံအတိုးအကျယ်ရှိသော အခန်းတစ်ခုတွင်၊ အသံသည် မျက်နှာကျက်နှင့် နံရံများပေါ်တွင် အကြိမ်များစွာ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး တိုက်ရိုက်အသံနှင့် ရောနှောနေပါသည်။
4. ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။ ဆောက်လုပ်ရေးတွင်အသုံးပြုသောအခါ၊ အသံစုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် အသံစုပ်ယူသည့်ဖွဲ့စည်းပုံများ၏ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများသည် တည်ငြိမ်သင့်သည်။
လွန်ခဲ့သော:3D Acoustic Wall တပ်ဆင်ခြင်း။
နောက်တစ်ခု:Polyester Fiber Acoustic Panel ၏အင်္ဂါရပ်များ